Muuri News Network » Ugandha oo Been & Run isku dartay Askar uga geeriyootay Gobalka Sh/hoose.
Ugandha oo Been & Run isku dartay Askar uga geeriyootay Gobalka Sh/hoose.
Dec 3, 2015 - Comments off
Dowladda Uganda ayaa soo sartay tirade guud ee Askarta u dhashay dalkeeda ee Sanadkan ku geeriyooday Dagaalka ay kula jiraan Al-shabaab iyaga oo ka hoos shaqeynaya magaca AMISOM.
Dhinaca kale, Tiradda Askarta Uganda kaga geeriyooday Soomaaliya ee sannadkan 2015ka ayaa waxay kor u dhaafayaan 70-Askari, iyadoo 50 ka mid ah lagu dilay weerarkii ay Xarakada Al-shabaab bishii September ku qaadeen Saldhigga Ciiddanka AMISOM ku lahaayeen Deegaanka Jannaale ee Gobalka Sh/hoose.
Al-shabaab ayaa sheegtay inay weerarkaasi ku dileen in ka badan 50-Askari, inkastoo uu Madaxweynaha Uganda. Yoweri Museveni khasaaraha ku sheegay ilaa 13 Askari.